SIDA LOO KORO DABAYSHA KULAYLKA XAGAAGA - DHIRTA DAWOOYINKA
Kalluunku waa warshad wax tar leh oo leh caraf udgoon oo udgoon oo macaan leh. Warshadda, oo si ballaaran loo isticmaalo karinta, farshaxanka, kiknoolajiyada iyo dawada dhaqameed, ayaa ixtiraam u haysa hantideeda hodanka ah ee malaayiin qof.
Maanta, anisi waxaa lagu beeray ku dhawaad ​​dhammaan dalalka adduunka, waa duurka kaliya ee Giriigga. In la ogaado qawaaniin fudud oo fudud, mid kasta oo naga mid ah ayaa kori kara dhaqankan gaarka ah.
Ma taqaanaa? Dadku waxay ogyihiin jiritaanka jiritaanka dabiicada ka soo horjeeda. Waqtigaas, guryo fara badan, xirmooyinka dabka ayaa ku xiran madaxa sariirta si loo nadiifiyo hawada oo looga hortago qarow. Dhamaan qarniyadii dhexe, anuunku aad buu u qiimo badanaa wuxuu ku kacaa lacag badan. Tusaale ahaan, qarnigii 14aad ee London, lacag ayaa laga soo ururiyey canshuurta iibinta dabka, waxay cusbooneysiiyeen Thames Bridge.
Anise caadiga ah: sharaxaad
Anise caadi ah (faro caraf udgoon leh, khudradda caleenta ah, sariirta salka) - Tani waa warshad sannadlaha ah oo kareysa. Oo magiciisiina wuxuu ka qaaday gasiirad Giriig ah, oo weliba Gariigeedu waxay ku magacaabeen midabyo kala cayncayn ah, iyo madowgii qaaliga ahaa.
Dhulka dhulku waa mid aan weli la garanayn: qaar baa aaminsan in uu ka yimid Aasiyada Yar, kuwa kale ee ka yimid Masar ama dalalka Mediterranean. Warshadu waxay leedahay astaamo toos ah leh height of 60-70 cm iyo ubax yar oo duurka dhirta.
Anisi ayaa hodan ku ah nafaqooyinka iyo walxaha raadraaca, sharaxaadda kiimikada kiimikada ayaa laga yaabaa inay xajiso wax yar oo qumman iyo fennel. Waxay ku jirtaa qadar badan oo borotiinka ah - 19%, ilaa 23% dufanka khudradda, ilaa 3% carbohydrates, sonkorta, iyo astaamaha dufanka leh, oo ay ku jiraan kafee.
Anis waxay leedahay waxqabadyo badan oo daaweyn ah waxayna ka caawisaa miyir-qabadka, boronkiitada, neefta, qufaca, oof-wareenka, laryngitis, kalyaha, kaadiheysta, xakamaynta, cudurrada caloosha, nidaamka wadnaha, iyo sidoo kale dib u nooleynta iyo dib u soo kabashada.
Anise waxaa si ballaaran loogu qaybiyaa warshadaha cuntada, waxa ay tahay, maanta waxay og yihiin meel kasta oo guri ah. Xataa riyadii qadiimiga ahaa waxay ogaadeen in anagi uu ka caawiyo in uu ka careysiiyo lakulanka, sidaas darteed waxay bilaabeen in ay ku daraan ilaa saxan kasta oo culus.
Kiriimka waxaa loo isticmaalaa alaabada wax lagu dubo, macmacaanka, saladhka, kalluunka iyo suxuunta hilibka. Waxaa intaa dheer, haddii kaliya miraha dabiiciga ah loo isticmaalo ujeedooyinka daawooyinka, ka dibna miraha (macmacaanka), qaybaha cagaaran (saladh iyo suxuunada dhinaca), iyo miraha waxaa loo isticmaalaa karinta. Waad ku mahadsan tahay dabka, suxuunta ma dhufan wakhti dheer mana helin qubays, haynta dhadhanka cajiibka ah iyo caraf udgoon.
Waa muhiim! Marka loo isticmaalo ujeeddooyinka culeyska, ha isku qalmin xiddiga xiddiga (xiddigta xiddigga) iyo dabka caadiga ah. Kuwani waa geedo kala duwan, inkastoo labaduba yihiin dhir ud. Waxay leeyihiin dhadhan isku mid ah, laakiin aragti kala duwan iyo dhadhan.
Sida loo abuuro dabka, doorashada goobta iyo diyaarinta ciidda
Hadda waxaan eegeynaa sida loo abuuro loona kobciyo qalabka guriga.
Meeshii ay ku beeran lahaayeen dabka
Anis sidoo kale waa warshad qabow u adkaysata iyo diirran, iyadoo aan loo eegin sida ay u yaaban tahay. Sidaa darteed, koritaanka wanaagsan ee korin, waxaa ugu wanaagsan in lagu beero meelo si fiican u iftiiminaya dhinaca koonfur-bari iyo koonfurta.
Anise jilicsan oo leh caawimo ah abuur ah oo Gagaab ah heerkul ah + 5 ... +8 ° C, laakiin heerkulka ugu fiicnayn waa + 20 ... +25 ° C. Si kastaba ha noqotee, dhirta dhalinyaradu waxay xitaa ku wareejin karaan heer-kulka ilaa -5 ... -7 ° C.
Ujeeda meelaha laga beeray meelaha khudradda hore ama dhirta miraha ah.
Goobta la doortay ee degitaanka waxay u baahan tahay in la diyaariyo xilliga dayrta, ka hor inta bilawga ah ee baraf ugu horeysay: qodo 25-30 cm oo ka saar haramaha.
Anisi waa dhaqan aad u baahan, sidaas darteed dhalidiisa waxaa ugu fiican ee carrada ciidda, hodan ku ah ciidda madow leh qadar ku filan oo lime iyo humus.
Sidoo kale, anisi waxay jecel yihiin ciidda dabacsan inay ku fiddoobaan fosfooraska, taas oo kordhisa dhalidda iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay saliida lagama maarmaanka ah.
Waa muhiim! Nooca loamy iyo carrada qulqulaya kuma habboona beerashada. Waxa kale oo aan suurtagal ahayn in lagu beero dabka ku yaalo meeshii cilantro loo isticmaalo si ay u koraan, sababtoo ah waxay leeyihiin cuduro isku mid ah iyo cayayaanka.
Inkasta oo ay iska caabbiyaan dalagyada cimilada qaboobaha, haddana maaha mid ku haboon in lala dhaqo beeritaanka dabka, sida ciidda qabow waxay keenaysaa koritaanka gaaban ee abuurka iyo horumarinta cudurrada.
Shuruudaha beeritaanka "geedo miraha"
Abuurka miraha waxaa lagu beeray guga, waxay noqon kartaa dhammaadka bisha Maarso - Abriil. Waqtigaa, ciidda waxaa si fiican loo kululaa ka dib jiilaal qabow.
Inkastoo bishii Abriil weli waxaa jira dhaxan, ma ahan mid cabsi leh, anisina si degan ayey u wareejineysaa. Wixii beer abuur ah waxaa lagama maarmaan ah in ciidda kulaalaa, laakiin waqti isku mid ah weli ku filan qoyaan.
Sida loo diyaariyo abuurka beeritaanka
Seeds waxay u koraan si tartiib ah sababtoo ah qolkooda cufan, oo aan ku dhaafin biyaha iyo hawada si xun, iyo sidoo kale sababtoo ah maaddada sare ee saliidda lagama maarmaanka ah ee miraha.
Cagaarka abuurka ayaa si weyn u saameeya heerkulka ciidda. Haddii ay tahay mid aad u hooseeya (+ 3-4 ° S), ka dibna miraha ayaa biqilaya 25-30 maalmood, haddii uu ka sarreeyo (+ 10-12 ° S), caleemaha ugu horreeya waxay soo muuqan doonaan laba toddobaad.
Ka hor inta aadan beerin, waa in marka hore lagu qooyay biyo leh heerkul ah + 16 ... +18 ° C ilaa 3-4 saacadood, badalida biyaha maalin kasta. Markaas abuur ah u baahan tahay in lagu duudduubay maro qoyan iyo hayso 2-3 maalmood heerkul ah + 18 ... +22 ° S.
Marka 4-5% ee miraha ay bilaabaan in ay Gagaashaan, waxay u baahan yihiin in lagu faafiyo lakabka khafiifka ah maro iyo wax yar la qalajiyey, kareyso waqti ka waqti. Sidoo kale, abuurku waa inuu maraa qayb ka mid ah xannibaadda qaybta qaboojiyaha ilaa 20 maalmood.
Tani waa lagama maarmaan si loo hubiyo in la qabsashada dalagyada marka ay dhacdo hoos u dhac ama hoos udhaca heerkulka hawada, oo inta badan lagu arko guga. Ka dib markii diyaarinta sida, miraha ku dhalaan 10-11 maalmood ka dib markii laga beerto.
Xeerarka beerista dabka
Isla maalintaas, markaad qorsheysid inaad ku beerato dabka, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u dabciso carrada oo aad samayso superphosphate. Si aad u hesho goosashada wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad ku beerto dalagga ee saf, fogaan ah 35-45 cm u dhexeeya iyaga.
Qoto beereedu waa wax aan ka badnayn 1.5-2.5 cm, ka dibna ciidda ayaa la duuduubay. Xilliga dhirta ayaa gaaraya 150 maalmood. Laba toddobaad ka dib muuqaalka caleemaha, waa in ay kudheeraadaan fogaan ah 10-15 cm.
Ma taqaanaa? Geed wanaagsan oo dhirta u dhow agteeda. Tani waxay faa'iido ma aha oo kaliya geedka, laakiin sidoo kale apiary laftiisa: dabayl waa a geedka malab fiican.
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato daryeelka ilkaha
Warshadu waxay u baahan tahay daryeelka caadiga ah: waraabinta, dabacsanaanta ciidda, quudinta iyo ka saarista haramaha. Waa lagama maarmaan in si taxadar leh loola socdo sida caaradu u koraan, sida qoyaanka ciidda xad dhaafka ah, roobka iyo qashinka badanaa waxay keenaan inflorescences cudurka iyo waxsoosaar yar.
Daaweynta inflorescences waa in si dhakhso ah looga saaraa. Wixii xooggan ee mass cagaaran, caleemaha ubax cusub oo jeexjeexin ama gooyay. Inta lagu jiro xilliga biqilka, laba taakuleyn ayaa lagu sameeyey Bacriminta dabiiciga ah iyo xal macdan oo daciif ah.
Kiriim: goorta iyo sida loo beero
Waqtiga uruurinta daawada badanaa waa dhexdhexaad iyo dhamaadka bisha Ogost. Si kastaba ha noqotee, ka hor intaadan qaadin daawada dabka, go'aami ujeedada aad u isticmaali doonto. Ujeeddooyinka culeyska, waxaad ku dari kartaa qaybta dhulka cagaaran ee dhirta ka hor inta aan ubaxin.
Cagaarka la uruuriyay waxay u baahan yihiin waxoogaa qallalan: si tartiib ah u gooyaa afkoda leh caleemaha oo qallaji qolka si fiican u hawo leh. Si waxtar leh, u diyaari faaruqi ama ku xir oo hoos u dhig.
Seeds ayaa la goostay marka jirridda dhirta ay noqoto mid jaale ah, oo midhaha canugana waxay soo jiidan doonaan hooska madow-brown. Markaas warshad waa la googooyaa, xidhxidhnaa rucubyo iyo dhirbaaxo si ay u bislaadaan hooska. Ka hor inta qalajinta, miraha waxaa lagu nadiifiyaa oo nijaar ah oo la jarjaray.
Ku kaydi abuurka baakad xiran ama bacaha canjoogga ah ee meel qalalan oo qabow ka baxsan gaariga qorraxda. Sidaa daraadeed dhadhanka udgoon ayaa sii jiri doona waqti dheer.
Iyadoo shuruudaha dibadda ee wanaagsan iyo u hoggaansanaanta dhammaan xeerarka daryeelka geedka, oo leh 10 mitir oo laba jibbaaran. m dalagga waxaad heli kartaa kiilo, iyo marmarka qaarkood abuur badan.
Goynta miraha ah ee loogu talagalay ujeeddooyinka daawada waxaa la qabtaa Sebtembar, ka dib marka dalladihii ugu horeeyay ay noqdaan kuwo bunni ah. Abuurka qallalan ee hawada furan ama qalajiyaha heerkulka aan ka badneyn 50 ° C. Abuurka miraha waxaa lagu kaydiyaa weel xiran muddo seddex sano ah.